Waxaan ahay la hayste. Xor ma ihi” Gabadh uu dhalay Raysalwasaaraha Imaaraadka | Berberanews.com
Home WARARKA Waxaan ahay la hayste. Xor ma ihi” Gabadh uu dhalay Raysalwasaaraha Imaaraadka
Waxaan ahay la hayste. Xor ma ihi” Gabadh uu dhalay Raysalwasaaraha Imaaraadka
Dubai-(Berberanews)-Muuqaallo cusub oo fiidiyoow ah oo ay heshay BBC-da, Princess Latifa bint Mohammed al-Maktoum, oo ah gabadha uu dhalay Madaxweynaha Dubai, ayaa ku andacoonaysa in qoyskeedu u haysto afduub.
Latifa waxay soo jiidatay cinwaano caalami ah sanadkii 2018 kadib markay si cad u sheegtay in loo xishay iyada oo aan rabin, xabsi guri. “Waxaan ahay la hayste. Xor ma ihi Waxaan ku xidhnahay jeelkan. Nolosheyda kuma jirto gacmaheyga, ”Latifa ayaa ku tidhi hal muuqaal, oo ay asxaabteeda ku sheegeen inuu ka mid ahaa lambar ay u dirtay kadib dhacdadii 2018 ee ay ciidamada kumaandooska ka qabteen doon yar oo ku dhow Hindiya. “Waxaan halkaan joogay tan iyo markii, in ka badan hal sano, waxaan ku jiray xabsi gooni ah. Maheli karo helitaanka gargaar caafimaad, maxkamad la’aan, lacag la’aan, waxba, “ayay 35-jirkani ku tidhi meel ka mid ah muuqaalka. Maalin kasta waxaan ka walwalayaa amnigayga, booliiskuna wuxuu iigu hanjabayaa inaanan mar dambe qorraxda arki doonin. Halkan kuma nabad qabo.”
Latifa waxay leedahay fiidiyowyada waxaa lagu duubay musqusha guri villa ah, maadaama ay ahayd qolka kaliya ee xarunta kuyaala oo leh quful. Muuqaalkaas waxaa salaasadii soo daayay BBC Panorama.
BBC-da ayaa sheegtay in saaxiibada Latifa iyo macallimadeedii hore, Tiina Jauhiainen, ay gacan ka gaysatay in taleefan gacmeed loo helo boqortooyada Dubai si ay u wada xidhiidho. Saaxiibbadeed waxay yidhahdeen Latifa waxay joojisay dirista farriimaha qarsoodiga ah ee fiidiyowga goor dambe waana in Qaramada Midoobay ay baadho, sida ay sheegtay BBC Panorama.
BBC-da ayaa sheegtay inay si madaxbanaan u xaqiijisay halka uu ku yaalo villa ay ku jirto, oo ay sheegtay inay ilaalinayaan 30 askari oo boolis ah oo ka shaqeynaya , laakiin hay’adu waxay sheegtay inaanay cadeyn inay wali amiiraddii halkaas joogto iyo in kale.
Muuqaaladan ayaa laga yaabaa inay dhaliyaan casho hor leh oo ku saabsan halka ay ku dambayn doonto Latifa, oo sii daysay fiidyow bishii March 2018 ee sheegtay in qoyskeeda laga ilaaliyo iyada oo aan rabin iyada oo ay la kulantay jirdil. Latifa waa gabadha uu dhalay Mohammed bin Rashid al-Maktoum, ra’iisul wasaaraha Imaaraadka.
“Ma doonayaan inay dib ii soo celiyaan anigoo nool,” Latifa ayaa ku tidhi fiidiyowga 2018.
Previous articlekomishanka, Xisbiyada qaranka iyo Hay,ado dawladdeed oo ka shiray Shuruudaha musharraxiinta